Qaramada Midoobay oo ka hadashay Shirka ka furmaya Magaalada Muqdisho – Banaadir Times
By banaadir 20th May 2021 39 No comment
Qaramada Midoobay ayaa so dhaweeysay shirka Madaxda dowladda, dowlad Goboleedyada & Gobolka Banaadir uga furmaya Magaalada Muqdisho, kaas oo looga hadlayo Arrimaha doorashooyinka.
Qoraal kooban oo kasoo baxay Xafiiska Qaramada Midoobey ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in Bahda Qaramada Midoobay ay arrimo shirka kala hadleen Ra’iisul Wasaaaraha iyo Madaxda dowlad Goboleedyada,waxaana ay ugu baaqeen hoggamiyeyaasha Soomaalida inay tansuul muujiyeen.
Bahda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waxaa sharaf u ahayd in ay la kulantay Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda xubnaha ka ah Federaalka maalmihii la soo dhaafay.
Waxaan ku dhiirrigelinnay dhammaan hoggaamiyeyaasha Soomaaliyeed in ay si daacadnimo leh uga qeybgalaan Shirka Muqdisho ka dhacaya si dhakhso looga heshiiyo hirgelinta doorashada.
Tanaasul iyo is afgarad ayaa loo baahanyahay si Soomaaliya ay horay ugu sii socoto ugana faa’iideystaan dhammaan ka dadka Soomaaliyeed. Ra’iisul Wasaare Rooble iyo madaxda kale ee Soomaaliyeed waxa ay heystaan taageerada Qarammada Midoobay ee ku aaddan guuleysiga Shirka Wadatashiga Qaran ee Doorashooyinka ee ay Soomaalidu hoggaamineyso.
Xiisad u dhexeysa dowlada Soomaaliya iyo Jubbaland oo ka taagan Ceelwaaq